Karen Community Association UK: 2011
INVITATION TO KAREN NEW YEAR CELEBRATION
Merry X'mas & Happy Karen New Year
သေနတ်သံတွေ နဲ့ ခရစ္စမတ်
Kachin people in Myanmar face food shortages
နိုင်ငံရေး အဆင်မပြေပါက အချိန်မရွေး သေနတ် ပြန်ပေါက်...
KNU နှင့် အစိုးရကြားတိုက်ပွဲများဆက်ဖြစ်
၇ ရက်ကြာ ၀ူထောတိုက်ပွဲ တွင် မြန်မာအစိုးရစစ်သား ၃၀၀...
ဗမာ့တပ်မတော် ချစ်တီးလို လယ်သိမ်းပြီး သီးစားချမူ ရပ...
ရန်ကုန်တွင် တိုင်းရင်းသားအရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည...
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးထက် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဖွဲ့ရေးကိ...
Burmese refugees find safe haven in Kentucky
Aung San Suu Kyi and Hillary Clinton talks to medi...
Obama, Clinton Have 'a Lot at Risk' in Delicate Re...
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန် သမ္မတ ဦးသိန်...
Posted by KCA.UK at 01:270comments
Posted by KCA.UK at 23:270comments
Posted by KCA.UK at 01:240comments
Posted by KCA.UK at 02:560comments
Posted by KCA.UK at 02:230comments
နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် အစိုးရ ဝန်ကြီးတချို့တို့ တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ရွှေလီမြို့တွင် အပစ်ရပ်ရေးကိစ္စအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း KIA နှင့် အစိုးရတပ်များအကြား တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ပင် ရှိသေးသည်။ ကချင်ဒေသမှ ဒုက္ခသည်များ ထောင်နှင့်ချီ ထွက်ပြေးနေရပြီး ယမန်နေ့က ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ INGO အဖွဲ့များ သွားရောက်ကူညီခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကချင်ဒေသအတွင်း အစိုးရတပ်များ တိုးချဲ့ချထားခြင်း၊ ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းများ ဆက်လက် မပြုလုပ်ရန် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ထံ ညွှန်ကြားချက်တစောင် ပေးပို့ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့တိုင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က အစိုးရ ဝန်ကြီးများနှင့် KIA ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် ထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းလည်း မရှိပေ။
Posted by KCA.UK at 00:050comments
စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူတာ မဟုတ်ဘူးလို့ တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ) က ပြောကြား
Posted by KCA.UK at 23:530comments
ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် နှင့် လု့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မုများ-ရုပ်သံ
Posted by KCA.UK at 11:030comments
နိုင်ငံရေး အဆင်မပြေပါက အချိန်မရွေး သေနတ် ပြန်ပေါက်နိုင်
Written by သတင်းနှင့်မီဒီယာ ကွန်ယက်။ ဇော်ကြီး။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။ Monday, 12 December 2011 11:30
မကြာသေးခင်က အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ထားသည့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း ခေါ် ရှမ်းပြည်ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးကောင်စီ SSA/ RCSS အဖွဲ့က နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြေလည်မှုမရပါက အချိန်မရွေး သေနတ် ပြန်ပေါက်နိုင်ကြောင်း ပြောဆို လိုက်သည်။
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့နံနက်က SSA/ RCSS ဌာနချုပ် လွယ်တိုင်းလျဲန်း၌ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ရဟန်းသံဃာ၊ ပြည်သူလူထုများနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား RCSS ဥက္ကဌ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်ဆစ်က ယင်းသို့ ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း အခမ်းအနား တက်ရောက်ခဲ့သည့် တပ်မှူးတဦးက အခုလိုပြောသည်။
“အပစ်အခတ် ရပ်စဲတာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခွဲပြတယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်သေနတ် ကိုယ်ကိုင်ထားပြီး ပစ်ခတ်မှုမလုပ်ဘဲ နှစ်ဦး သဘောတူ ရပ်ထားတာပေ့ါ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာက နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းပြီးတော့ တိုင်းပြည် အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြတာ။ အခုလုပ်တာက အပစ်ရပ်ထားတာပဲ ဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ နိုင်ငံရေး အဆင်မပြေရင် အချိန်မရွေး သေနတ် ပြန်ပေါက်လို့ ရတယ်ပေ့ါ။”
တချိန်တည်းတွင် RCSS အဖွဲ့က ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ အနေနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှ သွေဖယ်နေခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးများ ပိတ်ပင် တားဆီးခြင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ဖိနှိပ်မှုများ ဆက်လက် ကျူးလွန်နေပါက မိမိကိုယ်မိမိ ကာကွယ်ရန်နှင့် တိုင်းပြည်နှင့် အမျိုးသားရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန် အသင့်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
ထို့အပြင် ပြည်နယ်အစိုးရက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရန် ခက်ခဲနေသည့် အချက်များအား ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဆင့်တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်နှင့် ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရအပေါ် မူတည်သည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ “နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေက ရေရှည်ပြုလုပ်ရမယ့် ကိစ္စဆိုတော့ အဲဒီကိစ္စ က နည်းနည်း ကြန့်ကြာ နိုင်တယ်။” ဟု အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့သည့် တပ်မှူးက သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ပထမ အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲကို အစိုးရဘက်မှ ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် အဖွဲနှင့် SSA/ RCSS ဘက်မှ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်ဆစ် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့ နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့က ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ် တနေရာ၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲ၌ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန်၊ နှစ်ဖက် ဆက်သွယ်ရေးရုံးများ ထားရှိရန်၊ လက်နက် ကိုင်ဆောင်ခြင်း မပြုဘဲ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးကိစ္စများကို ပြည်ထောင်စု အဆင့်တွင် ဆွေးနွေးရန် စသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးမူ လေးချက်ကို အစိုးရဖက်က တင်ပြခဲ့သည်။
အလားတူ SSA/ RCSS ဘက်ကလည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို လွတ်လပ်စွာ ဖြေရင်းရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဗဟိုဌာနချုပ် နယ်မြေ သတ်မှတ်ပေး ရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်ပါဝင်ရေး စသည့် အချက်လေးချက် ကို တင်ပြခဲ့ရာ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက တရားဝင် လက်ခံရရှိကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ပြည်နယ်အဆင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က တောင်ကြီးမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစိုးရဘက်မှ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် စောဝ်အောင်မြတ် ဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် (၁၀) ဦး နှင့် SSA/ RCSS ဘက်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုင်းလူး ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင် (၆) ဦးတို့က နှစ်ဖက် တင်ပြချက်(၈) ချက် အား မူအရ လက်ခံခဲ့ပြီး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်းခေါ် ရှမ်းပြည်ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး ကောင်စီ SSA/ RCSS အဖွဲ့သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်က စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့သည့် ဦးခွန်ဆာ ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
Posted by KCA.UK at 00:000comments
၇ ရက်ကြာ ၀ူထောတိုက်ပွဲ တွင် မြန်မာအစိုးရစစ်သား ၃၀၀ ကျော်ကျ
နိုဝင်ဘာ ၁၅ရက် မြန်မာအစိုးရမှ သိမ်းပိုက်လိုက်သည့် ကန်ပိုင်တီလမ်းမှ KIA တပ်ရင်း၃ လဖိုင်စခန်း
ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ၀ူထောဘွမ် (Wuhtau Bum) ၀န်းကျင် မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) ကြား ၇ ရက်ဆက် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ မြန်မာအစိုးရတပ်မှ ၃၀၀ ကျော်ကျ၍ ၂၀၀ ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု ဒေသခံများနှင့် KIA အရာရှိများပြောသည်။
KIA တပ်မဟာ ၅ အောက် KIA တပ်ရင်း ၃ အခြေစိုက်စခန်း ၀ူထောဘမ်သည် မြစ်ကြီးနား-ကန်ပိုင်တီလမ်းနှင့် ဒဘတ်ချောင်း (Dabak Hka)ကြားတွင် တည်ရှိသည်။
ကျဆုံးသူများထဲမှ ၁၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ တစ်နေ့လုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တိုက်ပွဲတွင်ဖြစ်၍ ကလောအခြေစိုက် တပ်မ ၅၅ မှ အသစ်ရောက်လာကြသော မြန်မာအစိုးရတပ်သားသစ်များ ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံ ဆလန်တူး ပြောသည်။
ထိုနေ့မတိုင်ခင်က ကျဆုံးသွားသော မြန်မာအစိုးရစစ်သား ၂၀၀ ကျော်နှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၁၀၀ ကျော်မှာ မကွေးအခြေစိုက် တပ်မ ၈၈ မှ ဖြစ်သည်ဟု ဆက်ဆိုသည်။
ထို့ပြင် သေဆုံးသူများတွင် မြန်မာအစိုးရသစ္စာခံ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် လဆန်အောင်ဝါ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်း ပါဝင်သည်ဟု ဒေသခံများနှင့် KIA အရာရှိများပြောသည်။
မိမိနယ်မြေထဲ ချီတက်လာသောမြန်မာအစိုးရတပ်အား ပြောက်ကျားနည်းဖြင့်တိုက်ခိုက်၍ KIA ဘက်မှ သေကြေဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိဟု ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလက ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာအစိုးရနှင့် KIO ကြား ၂ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် မြန်မာအစိုးရတပ်အင်အား ထောင်ချီကို ကချင်ပြည်နယ်သို့ စေလွှတ်၍ စစ်ဆင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဗမာ့တပ်မတော် ချစ်တီးလို လယ်သိမ်းပြီး သီးစားချမူ ရပ်တန့်ရန် ပြည်သူများ လိုလားနေ
ဗမာ့တပ်မတော်မှ တပ်မ၊ တပ်ရင်းများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြည်သူများ ဘိုးစဉ် ဘောင်ဆက် လုပ်ကိုင်လာသော လယ်များကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ သိမ်းယူပြီး လယ်သမားများကို သီးစားချနေမူ အပေါ် လယ်သမားများက ရပ်တန့်ရန် လိုလားနေကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ထိုသို့ လိုလားနေရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ် ဗလိပေါက်ကျေးရွာ အုပ်စုမှ တောင်သူ လယ်သမားများလည်း ပါဝင်သည်။
" ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော် ကျေးရွာ အုပ်စုက လယ်ဧက ၄၃၂ ကို သိမ်းယူပြီး လယ်သမားတွေကို သီးစားပြန်ချပါတယ်။ တစ်ဧကကို တနှစ် အတွက် စပါးတောင်း (၃၀) ပေးရပါတယ်။ အုပ်စု တစ်ခုလုံးက တနှစ်ကို စပါးတောင်းပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကျော် အလိုလို ကျောက်တော် အခြေစိုက် တပ်မ ၉ ကိုပေးနေရပါတယ်။ ဒါကို သနားသက်ညှာသောအားဖြင့် ကင်းလွှတ်ခွင့်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ဆီကို စာရေးပီး အသနားခံထားပါတယ်" ဟု ကျေးရွာ လူကြီး တစ်ဦးမှ ပြောသည်။
ယခုနှစ်အတွက် ကျောက်တော် အခြေစိုက် တပ်မ စကခ (၉) မှ စပါးကောက်ယူရန် မလာသေးမှီ အချိန်တွင် ထိုသို့ သမ္မတကြီးထံ စာရေး တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
" သူတို့က နှစ်စဉ် ဒီလို ဒီဇင်္ဘာလနဲ့ ဇန္န၀ါရီဆိုရင် စပါး ကောက်ဖို့ လာပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလည်း စပါးတွေ လာယူဖို့ အတွက် စပါးတွေကို စုထားဖို့ ရွာသားတွေဆီကို အကြောင်းကြားစာ ရောက်နေပါတယ်။ သူတို့ မကြာခင် ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဆင်းရဲလွန်းအားကြီးတဲ့ အတွက် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ၊ ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် ဒီနှစ်က စပြီးတော့ စစ်တပ်က လာကောက်တဲ့ စပါးကို မပေးချင်တော့ပါဘူး" ဟု ပြောသည်။
ဗလိပေါက်တွင် ကျေးရွာသား အများစုမှာ တစ်နေ့ လုပ်မှ တစ်နေ့စားရသူ ဖြစ်ကြပြီး သားသမီးများကို မူလတန်း ပညာ အဆင့်ထိတောင် ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
တခြား ကျေးရွာသားတစ်ဦးကလည်း မပေးဘဲနေရင် စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးနိုင်ကြောင်း ယခုလို ပြောသည်။
" မပေးရင် ကျေးရွာသားတွေကို ဖမ်းဆီးနိုင်ပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေကလည်း စပါး မပေးတဲ့သူတွေကို ခင်ဗျားတို့ကို ထောင်ချမယ်။ ဖမ်းမယ်။ ဆီးမယ်။ ဒီလို ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ ဒီစပါးတွေက နိုင်ငံတော် အတွက် ကောက်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ခင်ဗျားတို့ ရွာသားတွေကို နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မူနဲ့ တရားစွဲမယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ ရွာသားတွေက မပေးဘူးလို့ သဘောတူထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖမ်းဆီးခံရမှာကိုတော့ တစ်ရွာသားလုံးက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ဗလိပေါက် ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် အဆိုပါ လယ်မြေများကို မဆလ အစိုးရ လက်ထက်က သက်ဆိုင်ရာ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ယူကာ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်း ဖေါ်ထုတ်ထားသော လယ်မြေများ ဖြစ်ကြပြီး မြေစာရင်းဌာနတွင် စာရင်းဖေါက်၍ မရှိသဖြင့် စစ်တပ်က မြို့နယ် မယကများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က သိမ်းယူသွားသော လယ်မြေများ ဖြစ်ကြကြောင်း သိရသည်။
" ရခိုင်မှာ စစ်တပ်က သိမ်းထားတဲ့ လယ်တွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ တချို့လယ်တွေက နယ်စွန် နယ်ဖျားတွေမှာဆိုတော့ ရွာသားတွေကလည်း ပညာ မတတ်တာနဲ့ မြေစာရင်း ဦးစီးဌာနမှ လပ ဖေါက်လို့ မရှိဘူး။ ဒါတွေကို စစ်တပ်က အကုန်သိမ်းတယ်။ နောက်လယ်တွေက စစ်တပ် တပ်ရင်း တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် ဆိုပြီး တပ်ရင်း အနီးအနားက သိမ်းယူသွားတဲ့ လယ်တွေပါ။ ဒီသိမ်းယူသွားတဲ့ လယ်တွေကို စစ်တပ်ကနေပြီး အင်္ဂလိပ် ခေတ်က အိန္ဒိချစ်တီး ကုလားတွေလို လယ်သမားတွေကို ပြန်သီးစားချ ထားပါတယ်။ တနှစ် အတွက် တစ်ဧကကို တချို့ မြို့နယ်တွေမှာ ဆိုရင် ၂၅ တင်းယူတယ်။ တချို့ ဒေသတွေမှာဆိုရင် ၂၅ တောင်း ယူတယ်။ လယ်သမားတွေကလည်း ကြောက်တော့ တောင်းတာကို ပေးနေရပါတယ်" ဟု မင်းပြားမြို့နယ်မှ ကျောင်းဆရာ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ်မှ ပါဒလိပ်ကျေးရွာ၊ ကြွီတဲကျေးရွာ၊ ချီလင်ပင်ရွာ၊ ငတောက်တက်ရွာ၊ ကျားမသောက်နှင့် ကြက်ကိုင်းတန်ကျေးရွာများမှ လယ်ဧက ၅၀၀၀ နီးပါးခန့်ကိုလည်း ပညာရေး (၁၀)၊ ခမရ ၂၃၂၊ ခမရ ၃၄၄ သိမ်းယူထားပြီး ရွာသားများကို ယခုလို သီးစားချကာ ဌားရမ်းထားကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင်လည်း လယ်သမားများပိုင် လယ်ဧက သောင်းချီပြီး သိမ်းယူထားပြီး တဖန်ပြန်၍ လယ်သမားများကို သီးစားချ ဌားရမ်ထားကြောင်း ဒေသအတွင်းက လာသော သတင်များ အရ သိရသည်။
" ကျွန်တော်တို့ အပေါက်ဝ ကျေးရွာမှာ ဆိုရင် လယ်ဧက ၃၀၀ နီးပါးခန့်ကို ကျောက်တော် အခြေစိုက် ခမရ ၃၇၉ က သိမ်းယူပြီး တနှစ်အတွက် တဧကကို စပါးတင်း (၂၅) တင်းနုန်းနဲ့ လယ်သမားများကို ပြန်ဌားစားထားပါတယ်။ ကျောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ ပုဏ္ဍားကျွန်း မြို့နယ် တလျောက်လုံးမှာ အသိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်တွေက အများကြီးပါ" ဟု အပေါက်ဝ ကျေးရွာမှ လယ်သမား တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ခေတ်တွင် အိန္ဒိယ ချစ်တီးကုလားများက မြန်မာ လယ်သမားများကို ငွေထုတ်ချေးပြီး ပြန်လည် မပေးဆပ်နိုင်သောအခါ လယ်များကို သိမ်းယူပြီး လယ်သမားများကို သီးစား ပြန်ချခဲ့သော စနစ်မျိုးကို ဗမာ့ တပ်မတော်ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြန်လည် ကျင့်သုံးနေသဖြင့် ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေပါသည်ဆိုသော မျိုးချစ် ဗမာ့ တပ်မတော် အပေါ် ရခိုင်ပြည်သူများက မေးခွန်းများ ထုတ်လျှက် ရှိကြောင်း သတင်းများ ရရှိသည်။
ဖနိဒါ | အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးပုံရိပ် ကော်မတီမှ ဦးဆောင်၍ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများ ဆွေးနွေး အဖြေရှာရန် ပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ကာ ရန်ကုန်မြို့တွင် လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့၌
ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။
“တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားနေတဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာ ပညာရှင်တွေ အားလုံးက ဝိုင်းပြီးဖလှယ်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံး အဖြေတခု ရလာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။”ဟု ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဆွေးနွေးပွဲ ရည်ရွယ်ချက်ကို
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်အင်အားတိုးချဲ့လာခြင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ထိုဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
“ပထမဆုံး ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံဉာဏ်ယူမယ်။ သူတို့ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေယူမယ်။ နောက်ဆုံး ဒုက္ခသည်တွေရဲ့
နေရာဒေသထိ ခေါ်သွားမယ်။ တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေးလိုအပ်နေတဲ့ နေရာထိဝင်ဖို့ထိ စီစဉ်ထားတယ်။ တကယ်ငြိမ်းချမ်း လိုအပ်တဲ့ အရာတွေဟာ ဘာလဲဆိုတာကို သူတို့ဆီက အဖြေရအောင် ယူမယ်။”ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အစိုးရမဟုတ်သော NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေး ပညာရှင်များ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လှုပ်ဆောင်နေသူများ၊ အနုပညာရှင်၊ စာပေလောက အသိုင်းအဝိုင်းမှ ပညာရှင်များ အပါအဝင် လူ ၇ဝ ဦးခန့်ကို ဖိတ်ခေါ်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိ ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံး ကျင်းပကာ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်း
ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။ ပညာရှင်များထံမှ ရရှိသော အကြံဉာဏ်များ ကို လက်ရှိ အစိုးရနှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဖလှယ်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲများမှ တိုင်းရင်းဒေသများ၏ လိုအပ်ချက် ရလဒ်အဖြစ် အဖြေကောင်းတခု ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့် ထားသည်ဟု လည်း ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့မှ ကချင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်း စသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်ပြီး ကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဒေါ်ဘောက်ဂျာ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌမှာ ရှေ့နေ ဒေါ်ကမ်းခန့်ဒိမ်း၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှ ကိုရှိန်ထွန်းတို့ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကြား တန်းတူညီမျှမှု၊ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး၊ ပြည်ထောင်စု တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးအတွက် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့် ဒေသများတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို တဘက်၊ တလမ်းမှ ဖော်ထုတ်
ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးပုံရိပ်ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှ ကိုရှိန်ထွန်းက ပြောသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ပုံရိပ်ကော်မတီက ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများ အဆုံးသတ်စေရေးအတွက် အစိုးရဘက်က စစ်အင်အားတိုးချဲ့လာမှုကို ရပ်တန့်ရန်၊ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို အစိုးရ မဟုတ်သော NGO အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား တရားဝင် ကူညီခွင့်ပေးရန်နှင့် စစ်ဖြစ်ပွားနေသည့် ဒေသများတွင် လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုများကို ရပ်တန့်စေရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့အကြား ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လမှစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၃၂,ဝဝဝ ကျော်ရှိနေပြီဟု KIO က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။
KIA မုန်းကို ၀င်စီးမှုတွင် မြန်မာအစိုးရ တပ်ရင်းမှုးအပြင် ၁၇ ဦးကျ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တရုတ်နယ်စပ် မုန်းကိုမြို့မှ မြန်မာအစိုးရ စစ်ဗျူဟာကုန်းနှင့် ရဲစခန်းအား ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)မှ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ မနက်အစောပိုင်း ၀င်စီးခဲ့ရာ ရဲနှင့် စစ်သား စုစုပေါင်း ၁၈ ဦး ကျဆုံးကြောင်း မျက်မြင်များပြောသည်။
ပထမဆုံး KIA ၏ မြို့တွင်း ၀င်စီးတိုက်ခိုက်မှုသည် နံနက် ၁ နာရီတွင်စတင်ပြီး ၄၅ မိနစ် ကြာ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများဆိုသည်။
သေဆုံးသူများထဲ ညီခွမ်း-ချင်းရွှေဟော် နယ်မြေခံ ခလရ (၁၂၉) တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးမောင်မောင်မျိုး ပါဝင်ကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦးလည်း ပါဝင်သည်ဟု KIA အရာရှိများပြောသည်။
တိုက်ပွဲကြောင့် ဗျူဟာကုန်းအတွင်း နေအိမ်အချို့နှင့် ရုံးခန်းအချို့ ပျက်ဆီးသည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။
ယခု ၀င်စီးမှုအား ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း KIA တပ်မဟာ ၄ လက်အောက် တပ်ရင်း ၃၆ နှင့် ၃၈ မှ တပ်သားများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
KIA ဘက်မှ တပ်ရင်း ၃၆ မှ တပ်ကြပ် ဆွမ်လွတ်ဂမ်ဆိုင်း ကျဆုံးသည်ဟု KIA အရာရှိများ အတည်ပြုသည်။
ထိုတိုက်ပွဲကြောင့် မြန်မာအစိုးရတပ်စစ်ကူယာဉ်တန်းများ မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ဂ်ိတ်မှ မုန်းကိုသို့ ချီတက်လာသော်လည်း ထိုနေ့ညနေပိုင်းအထိ ရောက်မလာကြသေးဟုဆိုသည်။
Posted by KCA.UK at 10:230comments
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးထက် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဖွဲ့ရေးကို UNFC စိတ်ဝင်စား
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်မှ ၃ဝရက်နေ့အထိ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်တနေရာ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ၊ (UNFC) အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်တရပ် ဖွဲ့စည်းရေးကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု အသစ်ဖွဲ့စည်းမည့် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးကော်မီတီဝင် တဦးကပြောပါသည်။
“ရည်ရွယ်ပြီးသားပါ။ နအဖက တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို အသိအမှတ်ပြုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ထားရာနေ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့လိုက်လံအပစ်ရပ်ခိုင်းနေတာပါ။နိုင်ငံရေးအရလည်း မဆွေးနွေးဘူးလေ၊ သူတို့ အတွက် လိုအပ်လာမှ အပစ် ရပ်ကြရအောင်၊ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ လိမ်ဖို့ဘဲ စဉ်းစားနေတယ်။ အခုလည်း ပေါ်လစီသစ်တခုနဲ့ လာပြန်ပြီး၊
အချိန်ဘယ်လောက် ဆွဲသွားဦးမလဲဆိုတာ သိနေတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ ပြောစကားနောက်ကို မလိုက်တော့ဘူး။ လုပ်စရာ ရှိတာကိုဘဲ လုပ်တော့မယ်ဟု UNFC ရဲ့ ကာကွယ်ရေးကော်မီတီဝင် တဦးက ဆိုပါသည်။
ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စကို UNFC ကောင်စီဝင် အဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့စလုံးက သဘောတူသည်ဟုသိရပါသည်။ UNFC အဖွဲ့ ဝင်များမှာ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး (CNF)၊ ကချင်ပြည် လွပ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP)၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (MNSP)၊ ပအို့ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ချုပ်(PNLO)၊ ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး (PSLF)၊ ရခိုင်ပြည် အမျိုး သားကောင်စီ (ANC)၊ လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် သမဂ္ဂ(LDU)၊ ၀အမျိုးသား အဖွဲ့ ချုပ်(WNO)၊ ကချင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNO)တို့ ဖြစ်ပါသည်။
“အင်အားဘယ်လောက်နဲ့ စဖွဲ့ မယ်ဆိုတာထက် မူပိုင်းဆိုင်ရာက အရင်ကျပြီးတော့ မခက်တော့ပါဘူး၊ လက်တွေ့ အကျဆုံးကနေစမှာပါ။ ဒီတော့ သိပ်မကြာတော့တဲ့အချိန်မှာ လက်တွေ့ ဖြစ်လာမှာပါဘဲ။ ပြည်ထောင်စုတပ်ဖွဲ့ ကို တော့ လိုအပ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကို စေလွှတ်လို့ ရတာပေါ့။ ဟု ဆိုပါသည်။
ပြည်ထောင်စု စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကို အကြမ်းဖျင်း ရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ပထမ အစီစဉ်တွင် ပြည်ထောင်စုစစ်တပ်ရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် KNU က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုးကို ရည်ရွယ်ထားခဲ့သော်လည်း အသက်အရွယ်အရသော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်တာဝန် များပြားခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ၄င်းက ငြင်းပယ်ခဲ့ပါ သည်။ ဤသို ကြောင့် စစ်ဦးစီးချုပ် အသစ်ကို KNPP ကရင်နီတပ်မှ စစ်ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ဘီတူးကို လျာထားသည် ဟုသိရပါသည်။
Posted by KCA.UK at 00:480comments
Posted by KCA.UK at 23:510comments
Aung San Suu Kyi and Hillary Clinton talks to media after meeting
Burma VJ Media Network's,
ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်တွင် ပြုလုပ်သော တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှု အပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ မှ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောထား အမြင်များကို တက်ရောက်လာသော မီဒီယာများသို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြားခဲ့
Posted by KCA.UK at 11:260comments
Secretary of State Hillary Clinton visited the Southeast Asian nation of Burma on Thursday. Margaret Warner discusses the significance of the isolated country\_'s first visit byaU.S. secretary of state in 50 years with William Wan of The Washington Post, who\_'s traveling with Clinton.
Posted by KCA.UK at 11:170comments
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံ (ရုပ်သံ)